မဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်း: Honeymoon to New Zealand Day6(Part 1) : A Visit to Hobbiton Movie Set
Honeymoon to New Zealand Day6(Part 1) : A Visit to Hobbiton Movie Set
ရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ အလုပ်က များနေ၊ ကိုရီးယားကားကိုက်နေ၊ ပိတ်ရက်လာပြန်တော့လဲ နယူးဇီလန်ခရီးစဉ်တောင် ရေးလို့မပြီးသေးဘူး ခရီးမသွားရ မနေနိုင်တာနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ဆီဗူးကမ်းစပ်နဲ့ မြို့ကို ၃ညအိပ် ၄ရက်ထွက်သွားတော့ မရေးဖြစ်ပြန်ဘူး (ရှူးတိုးတိုး… နယူးဇီလန်တောင် မပြီးသေးဘူးဆိုတော့ ဖိလစ်ပိုင်ခရီးစဉ်ကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပေးထားကြနော်)… ခုတော့ နယူးဇီလန်ခရီးစဉ် ၆ရက်မြောက်နေ့လေးရဲ့ Middle earth ကို အလည်သွားလိုက်ကြအုံးစို့…
ဟယ်လို မစ်စတာ ဘစ်ဘလို...
၇ရက် မေလ ၂၀၁၅ (ကြာသပတေးနေ့)
အဲ့ဒိနေ့အတွက် အွန်လိုင်းကနေ Hobbiton movie set tour ဝယ်ထားလိုက်တယ်။ တစ်ယောက်ကို NZD 110 ကျတယ်။
မနက် ၇နာရီခွဲ ဟော်တယ်ကနေ ထွက်လာတယ်။ ကားက isite မှာ သွားစီးရမှာဆိုတော့ Isite သွားရင်း လမ်းက Starbuck ဆိုင်မှာပဲ မနက်စာ ဝင်ဝယ်ဖြစ်တယ်။ ထိုင်စားနေဖို့ အချိန်မမှီမှာစိုးတာနဲ့ ထုတ်ခဲ့တယ်။
မနက် ၈နာရီ ၁၅မိနစ်မှာ isite ကိုရောက်ပြီး ၈နာရီခွဲမှာ Hobbiton သွားမဲ့ကားလာကြိုတယ်။ တစ်ကားလုံးမှာ အာရှတိုက်သားဆိုလို့ ကိုယ်တို့ ၂ယောက်နဲ့ ကိုရီးယားက ကောင်လေး ၂ယောက်ပဲပါတယ်။ ကျန်တာတွေက ဥရောပတွေနဲ့ အမေရိကန်တွေ။ ကားပေါ်မှာအလွန်တရာမှ အူမြူးပြီး ရွှတ်နောက်နေတဲ့ ဥရောပသားတစ်ယောက်ပါတယ်။ လူငယ်တွေဆိုတော့လဲ ပျော်မှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ Lord of the Ring ရုပ်ရှင်ကားကို ဘယ်နှခေါက်ပြန်ကြည့်ထားကြသူတွေလဲတော့မသိဘူး။ ကားဆရာက နည်းနည်းပြောတာနဲ့ သူတို့က အားလုံးသိ။ ကိုယ်က Lord of the Ring ကို သိပ်မမှတ်မိဘူး။ ၁ခေါက်ပဲကြည့်ဖူးတာ။ The Hobbit ကိုတော့ ကြိုက်တယ်။ ထွက်တိုင်း ရုံမှာ သွားကြည့်ထားတာလေ။ အဲ့ဒိကောင်လေးတွေဆို ဟော့ဘစ်လို ခံစားကြည့်ချင်လို့ အဲ့ဒိနေရာမှာ ဒီလောက်အေးတာတောင် ဖိနပ်မစီးပဲလမ်းလျှောက်ကြလေရဲ့။ ရုပ်ရှင်ရူးချင်းတူတာတောင် သူတို့က သာပါတယ်ဗျာ။ (သူတို့ထက်သာတာက တခြားတိုးအဖွဲ့နဲ့လာတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်က ဝတ်ရုံကြီးတောင် ဝတ်လာသေး..ခစ်ခစ်)
ဟော့ဘစ်တန်ကို မနက် ၁၀နာရီခွဲမှာရောက်တယ်။ လက်မှတ်အရောင်းကောင်တာမှာ ကားသမားက ဆင်းဝယ်သလား ကိုယ်တွေကို အိမ်သာအတွက်အနားပေးသလား၊ ကော်ဖီ အတွက်အနားပေးသလားတော့မသိဘူး၊ အဲ့ဒိ လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ မိနစ် ၂၀လောက်ရပ်လိုက်သေးတယ်။ အဲဒိမှာ တခြား မြန်မာခရီးသွားအုပ်စု တစ်စုတွေ့တယ်။ ပြီးမှ အဲ့ဒိ ဟော့ဘစ်ရိုက်ကွင်းဖြစ်တဲ့ အလက်ဇန်းဒါးမိသားစုပိုင် လယ်တောကို ကားနဲ့ ထပ်ဝင်ရတယ်။
ယာတောထဲ ဝင်ဖို့ အဝင်ဝ... အဲ့ဒိကနေ အထဲကို ကားမောင်းရသေးတယ်။
ဟော့ဘစ်တန်အကြောင်း သိခဲ့သမျှ (Briefly about The Hobbiton Movie Set)
၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ Director ဆာ ပီတာဂျက်ဆင်နဲ့ အဖွဲ့ဟာ ကမ္ဘာကျော်ဇာတ်ကားတစ်ခု ဖြစ်လာမဲ့ Lord of the Ring ရုပ်ရှင်အတွက် ရိုက်ကွင်းနေရာရှာရင်း ၁၂၅၀ ဧကကျယ်ဝန်းတဲ့ သိုး၊နွားမွေးတဲ့ အလက်ဇန်းဒါး လယ်တောကို မာတာမာတာမြို့ပြင်မှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါ ဒီနေရာဟာ J.R.R. Tolkien ရဲ့ ဂန္ဓဝင်ဝတ္ထုကို အသက်ပြန်သွင်းဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာပဲဆိုတာကို အရှင်းသိခဲ့ကြတယ်။
အဲဒိလယ်တောလေးဟာ သာယာလှပတဲ့ “The Shire” (ရှိင်းယား) လို့ခေါ်တဲ့ ဟော့ဘစ် (ဝထ္တုထဲက လူပု တစ်မျိုး) နေတဲ့ မြို့လေးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ ဒါရိုက်တာရဲ့ အလိုကျ ပုံဖော်ဖန်တီးမှုကို စောင့်မျှော်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အဲဒိလယ်တောပိုင်ရှင်နဲ့ စကားပြောပြီး ခွင့်ပြုချက်ရသွားတဲ့အခါ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို စတင်ခဲ့တယ်။ နယူးဇီလန် စစ်တပ်ကနေလဲ အကြီးစားစက်တွေ ပံ့ပိုးပေးပြီး ၁.၅ကီလိုမီတာရှည်တဲ့ လမ်းကို လမ်းမကြီးကနေ အဲ့ဒိ လယ်တောအဝင်ဝအထိ ဖောက်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ (သူတို့ရုပ်ရှင် ကမ္ဘာကျော်တာ မပြောနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကို ခုလို ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ အားစိုက်ထုတ်ထားတာ)။
ဝင်ဝင်ချင်းမှာ ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်း ယာတောလေးတွေ့တယ်။ အဲ့ဒိယာတောလေးက ခုနောက်ပိုင်း တိုးရစ်တွေအတွက် တမင်ကို ထားပေးထားတာတဲ့။ အလုပ်သမားတောင်ငှားပြီး အမြဲ ထိမ်းသိမ်းထားတယ်။
Hobbit Holes (ဟော့ဘစ် အိမ်ပေါက်လေးများဖန်တီးမှု)
စစချင်းဆောက်လုပ်ခဲ့တုန်းကတော့ ဟော့ဘစ် အပေါက်လေး ၃၉ ပေါက်ပေါ့။ ပထမတော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်တုန်းသုံးရုံမို့ အခိုင်အခံမဟုတ်ပဲ သုံးထပ်သားပြား၊ သစ်သားအပွနဲ့ ဖော့တွေကို ဆေးသုတ်ပြီးတော့ ဆောက်ခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်း The Hobbit ရုပ်ရှင်ကားအတွက်နဲ့ တိုးရစ်တွေအလာများလာတော့ ၄၄ ဟော့ဘစ်ပေါက်အထိ ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့။ ပြီးတော့ အခိုင်အခံ သေချာဆောက်လုပ်ဖြစ်ပြီး တိုးရစ်တွေ တစ်နှစ်ပတ်လုံးလည်ပတ်လို့ရအောင် ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ တချို့အပေါက်လေးတွေဆို အပေါ်စီးတို့ဘာတို့ကရိုက်ရင် လှအောင်သာဆောက်ခဲ့တာ တကယ်တန်း ရုပ်ရှင်ထဲတောင် မမြင်လိုက်ရ မပါလိုက်ရတာလေးတွေရှိတယ်တဲ့။ နောက်ပြီး အမြင်မှာ လှည့်စားဖို့အတွက် အပေါက်လေး တချို့က ပုံစံတူပေမဲ့ အရွယ်အစားမတူတာတွေရှိတယ်လေ။ ဥပမာ ရုပ်ရှင်ထဲက မှော်ဆရာ ဂန်ဒန်ဖ် က အပေါက်နဲ့ယှဉ်ရင် ကြီးပြီးပေါ်ရမယ်ဆိုတော့ သေးတဲ့အပေါက်နဲ့ ရိုက်တာပေါ့။ Biblo ကျတော့ ဟော့ဘစ်လူမျိုးဆိုတော့ အပေါက်က သူ့နဲ့ အရွယ်အစားကိုက်ရမယ်ဆိုတော့ နည်းနည်းကြီးတဲ့အပေါက်နဲ့ ရိုက်ရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ Biblo နေတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက “Bag End” လို့ခေါ်တဲ့ အဓိကအိမ်ပေါက်လေးကကျတော့ အတန်အသင့်ကြီးပါတယ်။
တောင်ထိပ်က Bag End လေ... Biblo တို့၊ Frodo တို့ရဲ့ အိမ်ပေါ့...
နောက်တစ်ခု အားလုံးသိချင်ကြမဲ့ အရာကတော့ ဟော့ဘစ်အပေါက်လေးကနေ သူတို့ အိမ်သေးသေးလေးထဲ ဝင်လို့ရမရ။ ဟုတ်ပါတယ် အိမ်သေးသေးလေးထဲလူတိုင်းဝင်ချင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မျှော်လင့်ချက်သိပ်မထားနဲ့နော်။ အမှန်တော့ ဟော့ဘစ်အိမ်လေးတွေက အပေါက်လေးတွေပဲဆောက်ထားပြီး အထဲမှာ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ တံခါးပေါက်နောက်မှာ တောင်ကုန်းနံရံ မြေကြီးပဲရှိပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်အခန်းတွေကို ဝါလင်တန်မြို့က ဝါတာ ထုတ်လုပ်ရေး စတီဒီယိုမှာ ရိုက်တာပါ။ ပြီးတော့ The Hobbit စစချင်းမှာ Gandalf က ဟော့ဘစ်အိမ်သေးသေးလေးထဲဝင်လာတုန်း အပေါ်က သစ်သားထုတ်တန်းနဲ့ ခေါင်းစောင့်မိတဲ့အခန်းက တကယ်တန်းတော့ ဇာတ်ညွန်းထဲမှာ မပါပါဘူး။ သူတကယ်ခေါင်းစောင့်မိသွားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ Gandalf အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ Ian Mckellen က ဆက်ပြီးသရုပ်ဆောင်သွားတော့ ဒါရိုက်တာကလဲ ခေါင်းစောင့်တာက ဟော့ဘစ် အိမ်ဘယ်လောက်သေးကြောင်းကို ပိုပြီး သိသာစေလို့ ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီး အဲ့ဒိအတိုင်းပဲ ရုပ်ရှင်ထဲ ထည့်လိုက်တာပါတဲ့။
ဟိုကြား ဒီကြားက Hobbit hole လေးတွေ...
ဒါကတော့ မဗေဒါရဲ့ အိမ်လေးပေါ့... ဟိ
ဒါက မဗေဒါ ဘေးအိမ်ကို လည်လည်သွားတုန်းက...
အဲ့ဒိအင်္ကျီလေးတွေကလဲ For show ပြထားတာ... လူဝတ်လို့ရတဲ့ ဆိုဒ်တောင် ဟုတ်ဘူး...
အိမ်ထဲမှာ Dwarfs တွေရောက်နေလို့ နေစရာမရှိလို့ အပြင်မှာထိုင်နေတာ...
ကိုကို နဲ့ လူဆိုးတွေချထားလို့ နှုတ်ခမ်းကွဲနေတာ...
အပေါ်မှာရပ်နေတာ လိုက်ရှင်းပြတဲ့ ဂိုက်၊ သူရှင်းနေတုန်း ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် မကြိုက်ဘူး။ ခပ်ရွဲ့ရွဲ့စကားပြောတယ်။
Mr.Right ရိုက်တာ... လှတယ်နော်... ကင်မရာလေး ဝယ်ရကြိုးနပ်.. Point and shoot တောင် အတော်လှ...
ဒါလဲ နောက် Point and shoot ပဲ...
Oak Tree at Hobbiton (ဟော့ဘစ်တန် က ဝက်သစ်ချပင်အကြောင်း)
Bag End မှာရှိတဲ့ Biblo ရဲ့ အိမ်ပေါ်တည့်တည့်ကတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာ ဝတ္ထုအရ ဝက်သစ်ချပင်ရှိတယ်လေ။
လူတွေ ချွေးနဲ့ ရင်းပြီး ဆင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက နာမည်ကျော် ဝက်သစ်ချပင် အတုကြီး...
အဲ့ဒိ အပင်လေးကို ပထမ Lord of the Ring ကားရိုက်တုန်းကတော့ မာတာမာတာ မြို့နားက အပင်ကို လိုအပ်တဲ့ အကိုင်းအရေအတွက်ကအစ သေချာ ခုတ်ဖြတ်ပြီး ဒီမှာပြန်ဆင်ထားခဲ့တာ။ အဲ့ဒိ အကိုင်းအခက်နဲ့ ပင်စည်ချည်းပဲ ၂၆ တန် လေးတယ်တဲ့။ အရွက်တွေက ဝတ္ထုထဲကနဲ့ မတူလို့ အရွက်အတုတွေကို ထိုင်ဝမ်ကနေ မှာပြီး တစ်ပင်လုံးမှာ ဝါယာတွေနဲ့ လိုက်ဆွဲထားတာတဲ့။ အရွက်အတု အရေအတွက် စုစုပေါင်း 376,000 ရွက် ရှိတယ်တဲ့။ (စဉ်းစားကြည့် အပင်တစ်ပင်လုံးကို မြိုင်နေအောင် အရွက်ပေါင်း ၄သိန်းနီးပါးကို ချိတ်ရတာ ဘယ်လောက်လက်ပေါက်ကပ်လိုက်မလဲ။ ပြီတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာကျ အရွက်တွေက အနီးကပ်တောင် ပါတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒါရိုက်တာ ဆာ ပီတာဂျက်ဆင် က အရမ်းအသေးစိတ်သမားဆိုတော့ သူလိုချင်တဲ့ပုံမရမချင်း ရုပ်ရှင်တဖွဲ့လုံးကို ခိုင်းတာပဲတဲ့။ ဒါရိုက်တာစကားအားလုံးက နားထောင်ကြလို့လဲ ဇာတ်ကားက ခမ်းခမ်းနားနားဖြစ်တာ)။ The Hobbit ဇာတ်ကားပြန်ရိုက်ဖို့ကျတော့ အဲ့ဒိ ဝက်သစ်ချပင်ကို အပင်သေးဖြစ်အောင် တစ်ခါပြန်ဖန်တီးရပြန်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းအရ The Hobbit က Lord of the ring ထက် အရင်ဖြစ်တာလေ။ The Hobbit ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ သိမှာပါ။ သူက Lord of the ring ကားထဲက Frodo ရဲ့ ဦးလေး အကြောင်းဆိုတော့ သစ်ပင်ကလဲ Lord of the Ring ထဲက သစ်ပင်ထက် ငယ်ရမယ်လေ။ ခု ကျွန်မတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးသစ်ပင်ကတော့ The Hobbit ကားထဲက အရွယ်အစားပေါ့။ (ကဲ… ဂိုက်သာရှင်းမပြရင် အဲ့ဒိရုပ်ရှင်ကားတွေအတွက် အဲ့လောက်အသေးစိတ်လုပ်ခဲ့မှန်း ကျွန်မတို့သိခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး၊ တချို့အကြောင်းကို အင်တာနက်မှာ ရှာမတွေ့ဘူး)။
ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတော့ ကာလာ သိပ်မစိုဘူး...
အသီးတွေက အတုတွေ ထင်တာပဲ...
ဒါက တခြား တိုးအဖွဲ့တွေ...
ရိုက်ချက်က ကမ်းကုန်တယ်... မပြောချင်ဘူး...
The Green Dragon Inn (နဂါးစိမ်း ဧည့်ရိပ်သာ ဖြစ်လာပုံ)
လာ Green Dragon Inn ဘက် ဆက်ကြမယ်
ဟော့ဘစ် နဲ့ Lord of the Ring ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပါတဲ့ Green Dragon inn ဆိုတာ ဇာတ်လမ်းအရ ဟော့ဘစ်လေးတွေ စုဝေးသောက်စားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေးပေါ့။ တကယ်တန်းရုပ်ရှင်ရိုက်တုန်းကတော့ အဲ့ဒိ ဆိုင်အတွင်းဘက်အပြင်အဆင် အခန်းတွေကို Wellington မြို့မှာရှိတဲ့ Weta ထုတ်လုပ်ရေး စတီဒီယိုမှာရိုက်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ခုတော့ အလက်ဇန်းဒါးမိသားစုက သူတို့လယ်တောထဲမှာ The Shire Rest လို့ခေါ်တဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးနဲ့၊The Green Dragon inn လေးကို ရုပ်ရှင်ထဲက အတွင်းပိုင်း အပြင်အဆင်အတိုင်းလိုက်ဆောက်ပြီး လာလည်တဲ့ ခရီးသွားတွေကို ဟော့ဘစ်တွေရွာ တကယ်ရောက်သွားတဲ့အတိုင်းခံစားနိုင်အောင် ဘီယာပါတိုက်ပါတယ်။ (တိုးပတ်ကေ့ထဲမှာ ဘီယာပါပါပြီးသားပါ။ ခက်တာက မဗေဒါက ဘီယာမသောက်တော့ အတော်နာပါတယ်။ အမှန်တော့ ဟော့ဘစ်တွေလို တကယ်ကို ခံစားကြည့်ချင်တာ။ ကြိုးစားပြီး တစ်ငုံသောက်တာ မျက်ရည်တွေဘာတွေထွက်လာလို့ ဆက်မလုပ်ရဲတော့ဘူး) ။ အဲ့ဒိမှာ ကျွန်မတို့ ဂရုထဲ ပါလာတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကောင်လေးတစ်ယောက်က စားပွဲခုံပေါ်တက်ပြီး ဘာတွေ အော်ပြောပြီး Cheer လုပ်ကြသလဲတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူအဲ့လို လုပ်လိုက်တော့လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ငါတကယ် အနောက်တိုင်းရောက်နေပါလား။ ရုပ်ရှင်ထဲက အတိုင်းပဲဆိုပြီး ခံစားရလို့ ကြိုက်ပါတယ်။ သူအဲ့လို စားပွဲပေါ်မတ်တပ်ရပ်ပြီးပြောချင်တာတွေပြောသွားတာ ကျန်တဲ့ သူတွေကလဲ ရန်လုပ်ခြင်း၊ ဖာသိဖာသာနေခြင်းလုံးဝမရှိဘူး။ သူပြောတာကို နားထောင်ပြီး အားလုံးက cheer လုပ်ပြီး ပျော်ကြတယ်။ အာရှတိုက်သားတွေဆိုရင်တော့ “အလကား Attention Seeker ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်လို့ပြောတာ။ သူပြောတာ ဘာလို့နားထောင်ရမှာလဲ” ဆိုပြီး ဖာသိဖာသာနဲ့ အဲ့လိုထလုပ်တဲ့သူ ငပေါကြီးဖြစ်အောင် နေကြမယ်ထင်တယ်။ သူတို့အနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့ မသိပေမဲ့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး လေးစားပေးတာ ပျော်တတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုလေးကိုတော့ သဘောကျမိတယ်။ (btw, ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရင်တော့ သူတို့တွေ ပြောတာကို နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒိ The Green Dragon Inn ထဲမှာ အဲ့ကောင်လေး ပြောသွားတာ ဘာတွေပြောသွားမှန်းကို နားမလည်ဘူး။ Mr.Right ကလဲ အိမ်သာသွားနေတော့ သူ့ကိုပြန်မေးလို့လဲမရဘူး။ ကိုယ့် Listening skill က တော်တော်လိုသေးတာလား။ သူ့အင်္ဂလိပ် လေသံကပဲ တမျိုးဖြစ်နေတာလားတော့ မသိဘူး)
ဟောဟိုမှာ Green Dragon Inn နဲ့ Double Arch Bridge
အရာရာဟာ အိပ်မက် ကမ္ဘာတစ်ခုထဲရောက်နေသလိုပဲ...
Green Dragon Inn အဝင်ပေါက်...
Inn အထဲက ပြတင်းပေါက်လေးတွေကနေ the Mill ဘက်ကို လှမ်းရိုက်တာ...
Green Dragon Inn အတွင်းဘက်...
ဘီယာ အလကားတိုက်တဲ့ နေရာ၊ မှောင်တော့ ဝါးသွားတယ်...
The Mill, Double Arch Bridge နဲ့ Party Area
အောက်က မြင်နေရတာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဟော့ဘစ်တွေ ပါတီလုပ်တဲ့နေရာလေ။ အဲ့ဒိအပင်ကြီးကို Party Tree လို့ ခေါ်ကြတယ်။
ဂျုံစက်ရယ်၊ စက်ဝိုင်းခြမ်း ၂ခုပုံပါတဲ့ ကျောက်တုံးတံတားရယ်က တကယ်တော့ တိုက်ဆောက်ရာမှာ ယာယီအသုံးပြုတဲ့ သံလုံးတွေ၊ သုံးထပ်သားပြားတွေ ဖော့တုံးတွေကို ကော်နဲ့ကပ် ဆောက်လုပ်ပြီး ကျောက်တုံးတွေနဲ့ တူအောင် ဆေးရောင်ခြယ်ထားခဲ့တာ။ အဲ့ဒိရွာက အိမ်ခေါင်မိုးက ဓနိမိုးတွေကလဲ အဲ့ဒိ လယ်တောထဲက ခြုံပင်တွေဆီကနေပဲ ယူပြီးဆောက်ခဲ့တာတဲ့။ ပြီးတော့ အဲ့ဒိရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့နေရာမှာ ပေါင်းပင်တွေပေါက်လာအောင် တမင်ထားရတယ်တဲ့။ အရင်က တိရိစ္ဆာန်မွေးတဲ့နေရာဆိုတော့ မြတ်တွေပဲ စနစ်တကျရှိတာလေ။ ဒါပေမဲ့ ပေါင်းပင်လေးတွေပေါက်လာတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဟော့ဘစ်နေတဲ့ ရွာလေးအဖြစ် ပိုပေါ်လွင်စေခဲ့တာပေါ့။
ရှင်းပြတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ကျွန်မတို့ အဖွဲ့သားတွေ... ကောင်မလေးနောက်က ကိုရီးယားကောင်လေး ၂ယောက်
Wish to meet with Gandulf
Party Area က စီးဆော စီးကြမလား...
Mr.Right က ရိုက်ပါတယ်။
ဦးထုတ် နားအုပ်နဲ့ ပြောင်စပ်စပ်က စကားအရမ်းများတဲ့ အရမ်း စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ကောင်ပေါ့...
Party Tree က အကြီးကြီးပဲ လှလဲ လှတယ်. ဒါရော အတုလား အစစ်လားတော့ မသေချာဘူး...
Party Area ထဲမှာ ပျော်ကြသည်။
Green Dragon Inn ထဲက နေထွက်လာပြီး ပြန်ရတော့မယ်...
The Mill လေးက ချစ်စရာလေး
The Mill နဲ့ အတူ...
တကယ့် အပြင်က Hobbiton Farm အကြောင်း
ရုပ်ရှင်ထဲမပါခင် အလက်ဇန်းဒါး လယ်တောမှာ သိုးကောင်ရေ ၁သောင်း၃ထောင်ကျော် နွားကောင်ရေ ၃၀၀ကျော် ရှိပြီး သိုးမွှေး၊ အမဲသား စသည်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ပိုင်ရှင် Russell Alexander က ဒီလယ်တောလေးက သူ့တို့မိသားစုအတွက်တော့ ရှိသမျှ အရာအားလုံးပါပဲလို့ပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ အလက်ဇန်းဒါး မိသားစုတစ်သက် သိခဲ့တာ လယ်ယာလုပ်ငန်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမြေကွက်ဟာ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုရဲ့ အသက်ဝိဉာဏ်တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပဲလုပ်တတ်တဲ့အတွက် ဒီမြေအတွက် ကျွန်တော်တို့က အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်”တဲ့။
ဒါပေမဲ့ အခုဆိုရင် အဲ့ဒိလယ်တောကို ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိတ်သတ် လာလည်သူပေါင်း ၁နှစ်ကို ၁သိန်းခွဲရှိသတဲ့။ နောက်ထပ် အားကျစရာကောင်းတာတစ်ခုက ဒီတိုးရစ်အလည်အပတ်နေရာကို ခုချိန်ထိ အလက်ဇန်းဒါးမိသားစုရဲ့ အပိုင်အနေနဲ့ပဲရှိနေပါတယ်။ ငါတို့ အာစီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ အာရှနိုင်ငံတစ်ချို့ မှာသာဆို အဲ့ဒိ လယ်တောကို အစိုးရအပိုင်သိမ်းဖြစ်နေလောက်ပြီ။ သူတို့နိုင်ငံများ ကောင်းလိုက်တာနော်။ နေရင်းထိုင်ရင် ကိုယ့်မြေက အကျိုးပေးတာ။ ရန်သူမျိုးငါးပါးထဲက “မင်း” ဆိုတာကို ပူစရာမလိုဘူး။
Mr.Right ရိုက်ပေးတာအပြင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲ ဖုန်းနဲ့ ဟောသလို ဆယ်လ်ဖီဆွဲသေးတာ...
သက်သေပစ္စည်း Selfie stick နဲ့အတူ...
အေးဆေး Mr. Right
Day6(Part 2) ဆက်ရန်။
Honeymoon to New Zealand: Day6 (Part 2)
Posted by mabaydar at 11:58 PM
ပုံေတြအရမ္းလွသလို ခုလို အေသးစိတ္ျပန္ေရးရတာလဲ လြယ္မွာမဟုတ္ဘူးေနာ္ စီဘူး ခရီးသြားပို႕စ္ေလးကိုလည္း ေမွ်ာ္ေနပါေၾကာင္း
10/01/2015 9:09 AM
ေမွ်ာ္ေနတာ ခုမွပဲဖတ္ရေတာ႔တယ္....။ နယူးဇီလန္မွာပဲေျပာင္းေနခ်င္ေတာ႔တယ္မေဗဒါရယ္..။
10/01/2015 10:30 AM
ေနရာတုိင္းမွာ ျမက္ခင္းစိမ္းေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ လွပေအးခ်မ္းတာပဲေနာ္။ ဒီေလာက္အေသးစိပ္ေရးႏုိင္တာကုိလည္း တကယ္ခ်ီးက်ဴးတယ္။ အားလည္းက်မိတယ္။ နန္းဆုိ အဲ့ေလာက္မမွတ္မိတတ္ဘူး။ း)
10/01/2015 12:19 PM
ေမွ်ာ္ေနတာ ခုမွ ဆႏၵျပည့္ဝေတာ့တယ္.. ရံုးမွာ ထမင္းစားခ်ိန္ဖတ္တာ ေဘးက မေလးသူငယ္ခ်င္းကပါ ဓါတ္ပံုေတြ ဝိုင္းၾကည့္ၿပီးလွလိုက္တာတဲ႔ ရိုက္တာေတာ္တယ္တဲ႔ ဒီထဲကဖတ္ထားတာကို သူ႔ကို ျပန္ေျပာျပလိုက္ေသးတယ္..
10/01/2015 4:49 PM
comment မေရးျဖစ္ေပမဲ႕ အျမဲ လာအားေပးပါတယ္ သမီးေရ
10/01/2015 6:04 PM
Cebu ခရီးစဥ္ကို ေတာင္းဆိုသြားတာ ဘူမ်ားပါလိမ့္။ မေဗဒါ့ Friendlist ထဲက မ်ားလား။ ေရးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ့မယ္။
ဆုျမတ္မိုး - တူတူပဲ ဆုျမတ္ေရ... အဲ့ဒိတုန္းက တကယ္ကို ေတြးမိတယ္... အဲ့ဒိက ဘ၀က ေအးခ်မ္းတယ္ အဲ့ပဲ retire လုပ္ရ ေကာင္းမလားလို႔...
နန္းေရႊမွဳံ - ဟုတ္တယ္ ညီမ။ သူတို႔ ေတာင္ေတြက ျမက္ပင္ေတြပဲ မ်ားျပီး အပင္ၾကီး သိပ္မရွိဘူး။ ေတာင္ကတံုးေတြ။ ကိုယ္ေတြလို အေရွ႕ေတာင္အာရွက လာတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ အျမင္ဆန္းေနတာေပါ့။ SEA ေရေျမေတာေတာင္ေတြက်ေတာ့ Rainforest ေတြေလ။ သူတို႔ဆီမွာ Rainforest ေတြရွိရင္ေတာင္မွ ေပါက္တဲ့ အပင္ေတြက မတူႏုိင္ဘူး။ မေဗဒါက မွတ္စုစာအုပ္ထဲ ေရမွတ္တန္မွတ္၊ တခ်ိဳ႕ဟာေတြက်ေတာ့ ဓာတ္ပံုေတြထဲကေန ျပန္မွတ္မိတာရွိတယ္ေလ။ တစ္ခ်ိဳ႕ အင္ဖိုေတြကေတာ့ အင္တာနက္ကေနရွာျပီး ပိုျပည့္စံုေအာင္ေရးေပးတာ... လာဖတ္ျပီး ကြန္မန္႔ေပးလို႔ ေက်းဇူးပါညီမေရ...
10/01/2015 6:07 PM
ခုမွပဲ လာဖတ္ရေတာ့တယ္ ဖတ္လို႕ေကာင္း ပံုေတြလည္း တအားလွ
10/01/2015 6:11 PM
ခုပဲ ခ်စ္ခ်စ္ကေျပာတယ္ နယူးဇီလန္ကအေဝးၾကီး ေစ်းၾကီးတယ္ မသြားနဲ႔ direct flight လဲမရွိဘူး လန္ဒန္ကေန နာရီ ၃၀ေလယာဥ္စီးရမယ္တဲ႔ ဝါးးး
စလံုးကလူေတာင္သြားတယ္ဆိုေတာ႔ စလံုးနဲ႔ကပိုနီးတယ္တဲ႔ ဝါးးးး
Hobbit ၾကိဳက္တယ္ Hobbiton သြားခ်င္တယ္
ခုေတာ႔ မေဗဒါေက်းဇူးနဲ႔ သိလာတဲ႔ လယ္ေတာနဲ႔ ဆက္တင္ေတြအေၾကာင္း ေယာက်္ားကိုဆရာလုပ္ျပီး လွမ္းေျပာျပေနတယ္
ဒါနဲ႔ Green Dragon Inn ကထြက္လာတယ္ဆိုတဲ႔ စံုတြဲပံုေလးထဲမွာ မေဗဒါျပံဳးေနတာ လွတယ္သိလား အဲလိုမ်က္နွာအေနအထားေလးကိုမွတ္ထားျပီး ေနာက္ဆို အနီးကပ္ပံုရိုက္ရင္ အဲလိုရိုက္ ဟီးး ဝိုင္းဆိုအဲလိုပဲလုပ္တယ္
10/04/2015 6:49 PM
Honeymoon to New Zealand Day6(Part 1) : A Visit ...
Hello Monster (aka) I remember You (K-drama Review...
Rotorua, New Zealand အိပ်မက်ကမ္ဘာ ရိုတိုရူဝါ